Ungakwenza kanjani ukufakwa okuhlanzekile kweMacOS High Sierra 10.13 | Ngivela kwa-mac
UJordi Gimenez | | i-MacOS High Sierra, Izifundiswa
Ngabe ufuna ukufaka iMacOS High Sierra kusuka ekuqaleni? Sibhekene nohlelo olusha lwe-Apple lokusebenzisa ama-Mac futhi uma sesilulande kwikhompyutha yethu, izinhlobo ezimbili zokufaka zingenziwa: leyo esiyibiza ngokuthi yi-Update naleyo esiyibiza ngokuthi ihlanzekile noma ekuqaleni.
Ezimweni zombili, umsebenzisi ukhetha okukhethwa kukho okuhle kakhulu futhi kusobala ukuthi konke kuzoncika kulokho esikwenza nsuku zonke nethimba lethu, uma siqoqa izicelo eziningi noma imibhalo nokunye. Enye idatha ebalulekile kuzimo zombili lezi, noma ngabe siyayivuselela noma siyifaka kusuka ekuqaleni, kuphoqelekile ukwenza ikhophi yokusekelayo ye-Mac yethu ku-Time Machine noma efanayo, ngakho-ke sizogwema ukuphathwa yikhanda uma kukhona okungahambi kahle.
Iqiniso ukuthi lolu hlobo lwezibuyekezo ezibalulekile kuyelulekwa ukuthi uzenze kusukela ekuqaleni yize kungeyona imfuneko ebalulekile, okungukuthi, Uma ungafuni ukufaka iMacOS Sierra kusukela ekuqaleni, mane uyilande ku-Mac App Store bese uqhafaza ku-install. Sincoma ukuthi wenze ukufakwa kusuka ekuqaleni ukuze uqede noma yiziphi izinhlelo zokusebenza ezingafakwanga, amaphutha noma yini engalimaza umuzwa ngenguqulo entsha yohlelo, qhubeka lokho okungaphoqelekile, singabuyekeza futhi sihambe.
1 Ukufaka kusuka ekuqaleni
2 Ukuvuselelwa kwemishini
Ukufaka kusuka ekuqaleni
Kulokhu, esizokwenza kulo nyaka ukubeka eceleni ithuluzi elisisiza ukuthi sakhe i-boot disk kusuka kwi-USB noma idiski yangaphandle ene-8 GB yokugcina kanye sizokwenza kusuka ku-Terminal. Into yokuqala esizoyenza landa iMacOS High Sierra ku-App Store, Lapho ukulanda sekuqedile ngeke sikufake, sizovala isifaki ngokucindezela u-cmd + Q.
Lapho ukulanda sekuqala singaqhubeka nenqubo yokufaka kusuka ekuqaleni futhi ilula kakhulu. Fometha bese uqamba kabusha i-USB ibe yi- bese siyavula ukuphela futhi sikopisha ikhodi ukuthi sishiya lapha ngezansi, sizosicela iphasiwedi yethu, siyifaka bese siqhubeka.
sudo / Izicelo / Faka \_ macOS \_ High \_ Sierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia –volume / Volumes / Untitled –applicationpath / Applications / Install \_ macOS \_ High \_ Sierra.app
Silungile, manje sidale isifaki okufanele silinde kuphela ukuthi iMacOS High Sierra entsha ikopishelwe ku-USB. Ukufomatha kuzokwenziwa ngokuzenzakalela futhi kufanele sinefomethi yediski yethu yangaphakathi lapho kutholakala khona uhlelo oludala lokusebenza, okuyi-MacOS Sierra. Ngemuva kwalokho nje nge-USB noma idiski yangaphandle exhunywe kwi-Mac, okumele sikwenze ukuthi boot ngokucindezela i-Alt bese ufaka uhlelo olusha lwe-MacOS High Sierra.
Uma sifuna singakweqa ukufakwa kusuka ekuqaleni, umane uvuselele i-Mac kusuka ku-Mac App Store. Lokhu okwenzayo ukufaka uhlelo ngaphezulu kwalokho esinakho futhi yize kuyiqiniso ukuthi i-Apple ayisivimbeli ekwenzeni lolu hlobo lwezibuyekezo, uma sinamafayela amaningi, izinhlelo zokusebenza nokunye ku-Mac, kungahle ngokuhamba kwesikhathi hamba okunye okuhamba kancane. Siyabazi nabantu abangakaze benze okuhlanzekile noma ukuklwebheka ukufaka kuma-Mac abo futhi abakaze babe nezinkinga.
Kunoma ikuphi, ukubuyekeza iMac kulula futhi kufanele silandele ifayela le- izinyathelo ezikhonjiswe yisifaki se-MacOS High Sierra. Siyabona ukuthi zilula kakhulu futhi ngokuyisisekelo kungukunikeza: okulandelayo - okulandelayo - okulandelayo.
Kubalulekile ukuthi sisho ukuthi ukwenza isipele kulawa macala nakho kubalulekile, singahle sihlushwe amandla kagesi ngokungalindelekile noma okunye ukubuyiselwa emuva okuchitha intambama ikakhulukazi imibhalo esinayo kukhompyutha, ngakho ngaphambi kokuchofoza inkinobho yokuvuselela Ngemuva kokulanda, kubalulekile ukwenza i- ukwenza isipele usebenzisa i-Time Machine noma yiliphi ithuluzi esilifunayo. Uma unemibuzo ungasebenzisa isigaba sokuphawula.
Ekugcineni, kwenze kucace ukuthi ukufaka kusuka ekuqaleni kungaba nzima kakhulu Okwalabo basebenzisi abangajwayelene nama-Mac noma abasanda kuthenga imishini, ngakho-ke uma usanda kuba ne-Mac awukasitholi isikhathi "sokuyilayisha okonakele" ngakho-ke kungcono ukuthi ubuyekeze ngqo futhi ngeke ube nankinga ngakho futhi imishini yakho izosebenza ngokuphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungakwenza kanjani ukufaka okusha kwe-MacOS High Sierra 10.13
Sawubona, ngine-Imac kusuka ngo-2013 nangemva kokufometha ikhompyutha nokuzama ukufaka i-OSx, uhlelo lungitshela ukuthi iSierra ayitholakali ku-App Store ...
unayo i-bootable USB set up? unayo i-wifi esebenzayo?
Kunoma ikuphi, uma ulandela izinyathelo, kufanele ikusebenzele, ngaphandle kwalokho ungahlala ufaka kabusha kusuka kusipele seTime Machine.
Sawubona, uma ngine-Wi-Fi esebenzayo kodwa anginayo i-USB edaliwe noma ikhophi ku-Time Machine… futhi nekhompyutha isivele ifomathiwe….
Bheka, sihlala sixwayisa ngezipele huh!
Zama ukucisha iMac futhi uma iqala cindezela u-Option-Command-R, bese ubuyekeza kunguqulo yakamuva ye-macOS ehambisana nekhompyutha yakho
Iqiniso ukuthi nginawo wonke amafayela wami abalulekile aphephile kepha bengifuna ukufaka i-OS ekuqaleni ... ngilandele izinyathelo eziqala nge-Command + R kepha lapho ngisesha i-App Store i-OS ibingasatholakali ... uma ngifika ukwazi ukuthi lokhu akunakwenzeka kwenzeka kimi ukufometha iqiniso….
Kuhle benginombuzo, ngine-macbook pro 2012 futhi bengifuna ukuyifaka ekuqaleni, nginezidrayivu ezimbili ezinzima, i-ssd lapho ngine-system nezicelo ezifakiwe nenye i-HDD engithanda kuyo izithombe, umculo nokunye, yenza ukufakwa kusuka ekuqaleni, ngabe womabili amadiski ayahlanzwa? Noma ngabe ifomathiwe kuphela i-ssd?
Sawubona, vele ufomethe i-SSD enye ayidingekile
Sawubona Borja, kufanele ufomathe kuphela idiski onayo i-OS, enye, ungayithinti.
Sawubona futhi, ngizama ukwenza i-usb kwenye imac ene-sierra futhi lapho nginamathisela umugqa esigungwini ingitshela….
Kufanele ucacise indlela yevolumu.
Ngizamile kaningana ...
Lo myalo ungowokwakha isifaki seMacOS High Sierra, hhayi iMacOS Sierra
Ngempela imiyalo yakho ayilungile, cela indlela yevolumu
"Sudo / Applications / Faka \_ macOS \_ High \_ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volumes / Untitled –applicationpath / Applications / Faka \_ macOS \_ High \_ Sierra.app"
Kubukeka sengathi kune-glitch emibhalweni lapho ubhala ikhodi ngesandla akunjalo?
Futhi umyalo uyefana kuzimo zombili
Empeleni ngiyikopishe ngayinamathisela, le engiyifakile isivele ilungisiwe, sengivele nginesifaki sami se-usb 😛 Tks!
UWinston duran kusho
Ngine-iMac Late 2009, ngine-MacOS Sierra efakiwe futhi lapho ngizama ukubuyekeza ku-MacOS High Sierra, ngithola iphutha ¨ Kube nephutha ekuqinisekiseni i-firmware ¨
sikhona isisombululo sale nkinga ???
Winston sawubona, yenza isheke lokuqala losizo ku-OS X bese uhlola isibuyekezo esiphezulu se-sierra noma uphinde usilande. Mayelana
Ngikwenzile futhi ngirekhode ne-usb ukuyifaka kusuka ku-0, kepha ukufakwa akupheli futhi kungithumela emuva ukubuyisa uhlelo.
Kungenzeka ukuthi i-SSD (iSanDisk) ayihambelani yingakho inika lelo phutha noma ingangivumeli ukuthi ngifake?
Izinhlamvu ngaphambi kwesiqondisi «ivolumu» azilungile; Kubukeka sengathi wonke amawebhusayithi ayikopishe emthonjeni owodwa ongalungile. Ukuyilungisa, susa udwi osuvele utholakala embhalweni bese uwufaka esikhundleni samadeshi amabili amasha. Ungasebenzisa okulandelayo:
sudo / Izicelo / Faka iMacOS High Sierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia –volume / Volumes / Untitled –applicationpath / Applications / Install MacOS High Sierra.app
Uma kukhulunywa ngokusula idiski enkulu (i-SSD) kwiDisk Utilities, kufanele ngabe ufake i-AFPS noma iMacOS Plus (ngerejista)?
Uma kuyi-SSD ungafaka i-AFPS noma i-MacOS Plus, noma yikuphi okufunayo
Ukuphathwa kwefayela nge-SSD kuthi i-Apple iyashesha futhi ingcono nge-AFPS
UManu ngemuva kokufunda izinkundla eziningi uncoma ukubeka iMacOS Plus (ngokubhalisa) uma ukufakwa sekuqediwe uma uhlola i-hard drive yakho kuvela nge-AFPS
UFrancisco Valenzuela Rojas kusho
Izolo ebusuku ngenze i-usb drive nge-terminal, umnikelo uyaziswa. Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi ngizolinda izinsuku ezimbalwa, ngoba kunezinhlelo ezingasebenzi nalesi sibuyekezo esisha.
Ngibonile ukuthi abanye abasebenzisi banenkinga efanayo naleyo engiyethula njengamanje, ngazama ukuyivuselela, kepha kunginikeza iphutha lokuqinisekisa iFirnware. Ngirekhode i-USB ukwenza ukufakwa 0, kepha ayikaze iqede ukufaka futhi yangithumela esikrinini sokubuyisela.
UJESU NAYE kusho
Impela kwenzeka into efanayo kimi kwi-macpro ka-2013 ene-1tb owc ssd, ngizamile ukuvuselela kuphela futhi noma kunjalo futhi kusukela ekuqaleni angiphumelelanga noma ngasala esikrinini nefolda nombuzo ocwayizayo ngaphakathi.
Phendula UJESU NAKHO
Sawubona, ku-macbook pro yami kusuka ngo-2012, ufake i-sierra ephezulu kusuka ekuqaleni kuhlukaniso, kuvela ukuthi izinkinobho ezimbalwa azisebenzi, lapho kusuka e-sierra kungekho nkinga ngekhibhodi, noma yimiphi imibono? ngibona kakhulu
Kuhle. Ngifuna ukulanda i-High Sierra ukuze ngisebenzise i-ssd yangaphandle njengediski eyinhloko ye-iMac yami. Iqiniso ukuthi sengivele ngiyifakile, futhi ngeke ingivumele ngiyilande futhi. Ngingakwenza kanjani ukuqala yonke inqubo ngokuhamba kwesikhathi?
Lapho ufaka iMac OS high Sierra, izongicela i-akhawunti ye-iCloud, ngoba anginayo, okuthiwa lapho ngiyifaka kusuka ekuqaleni kuba sengathi ngiyithenge entsha.
Sawubona. Ngangiyifometha kanjani iMacbook Pro kodwa ngesikhathi sokufakwa i-OS ihlala phakathi futhi ayisayifaki. Ngiwushiye izinsuku ngibheka ukuthi uyasebenza kodwa cha. Futhi shintsha i-hard drive yenye ebenginayo kepha lokho akungivumeli noma ngifomathe iMac OS (ngerejista).
Uxolo ngokuxakaniseka ... uyazi uma kunenkinga yokufaka kusuka ekuqaleni kusihlukanisi esivele siyi-APFS? Ngiyabonga
kwi-iMAC ngasekupheleni kuka-2013, ngakha i-USB nakho konke okulungile. Ngiqala nge-ALT, ngikhetha i-USB ... Futhi ngemuva kwemizuzu embalwa ngithola isikrini esimnyama esishintsha phakathi kwegundane nekhibhodi (futhi engaliboni igundane)
Ingqikithi, ebengingakwazi ... Bese ngiqala kabusha i-COmand + Option + R ... bese uma iqala ukusebenza. Ingibuza ukuthi ngifuna ukwenzani, futhi ngifometha i-SSD ukuthi ngiyifake ekuqaleni. Inkinga ukuthi i-SSD ibivele inayo njenge-APFS ... Faka, kepha ngibheka ilog futhi kunamaphutha amaningi, ikakhulukazi ahlobene ne-AFPS ... Ingqikithi, ngemuva kwemizuzu eyi-15 ithi kunephutha, futhi ayifaki lutho.
Ngenza into efanayo futhi, futhi umphumela uyefana; futhi angikwazi ukuguqula kabusha i-SSD iye kuma-MacOs ngerejista… ngeke ikuvumele.
Ekugcineni bekufanele ngilulame kwi-Intanethi, bese kuba yi-TimeMachine ... futhi-ke, akukho okuzofakwa kusuka ekuqaleni
Sawubona Miguel; Into yokuqala oyibalayo iyenzeka nakimi (ngijabule kakhulu ukuthi angingedwa) futhi ngemodeli efanayo ye-iMac (ngasekupheleni kuka-2013) kanye nange-SSD hard drive (kimi ngiyishintshe ku-Apple SAT bangifaka ngendlela engavumelekile) (yini engaliboni igundane ngemuva kokukhetha ukwahlukaniswa kokufakwa kwe-USB).
Ngize ngavula ingxoxo ne-Apple SAT futhi ngagcina sengiyihambisa kwi-SAT ebonakalayo (ngangisalelwe izinsuku ezintathu ngaphambi kokuthi i-Apple Care iphelelwe isikhathi); Kuwo womabili lawa macala awazange angixazululele wona noma awuthole njengephutha, ngakho-ke nginakho ekhaya, konke kusebenza kahle ngaphandle kwalowo mniningwane omncane.
Lapho ngiyifometha nge-Control-Alt-R angibange ngisaba nenkinga, ngenhlanhla, njalo ngefomethi ye-APFS.
Kodwa-ke, kwi-macbook yami ka-2016 akwenzeki lokho futhi konke kusebenza ngokujwayelekile; iMac nayo ikwenze ngaphandle kwezinkinga ngaphambi kokuthuthukela kwi-High Sierra ne-APFS.
Sawubona igama lami ngu-Antonio. Ngicela ubheke ukuthi ungangisiza yini, ngiyabonga kusengaphambili.
Ngine-Mac mini Yosemite enesistimu yokusebenza yaseSierra, ngihambile ukuyokuvuselela futhi ngibona ukuthi kuthathe isikhathi eside ukuyicisha, manje ngeke iqale.
Iba nekhibhodi okungeyona i-apula iyi-Trust ejwayelekile.
Nginezipele ku-hard drive yangaphandle, kepha angikwazi ukuqala kwi-disk.
M. Joseph kusho
Sawubona, igama lami nginguM. José. Ngisanda kuthenga iMacBook Pro futhi angazi ukuthi ngingakwazi yini ukufaka izinhlelo ebezikade zisetshenziswa njengomculi wokuphrinta no-corel (ngicabanga ukuthi isebenzisa uhlelo oluhlukile lokusebenza). Uma kungenzeka ngingathanda ungitshele ukuthi ngenza kanjani.
Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwakho
Ukukhokhela izinto zokuhamba zomphakathi eSingapore nge-Apple Pay kungahle kwenzeke ngo-2018